Iibsiga Jumlada - JOOPZY
Marka waxaad diyaar u tahay inaad iibsato caawimaad culus oo ah alaabooyin cabsi badan leh? Wanaagsan! Haddii ururkaaga, shirkaddaada, ama kooxdaadu ay rabaan inay alaabo naga iibsadaan tiro ahaan, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno! Dabcan, shaqsiyaadka sidoo kale wax bay ku iibsan karaan.
Waxay kuxirantahay sheyga iyo xaddiga la iibsaday, sicir-dhimistayadu waxay noqon kartaa sida ugu sarreysaa 25% qiimaha tafaariiqdayada (ogolaanshaha alaabada).
Shuruudaha amar ugu yar
Waa inaad iibsato ugu yaraan $ 1000 hal shey si loogu qalmo qiimahayaga badan.
Hadday suurtagal tahay, waxaan door bidnaa inaanu markabkaaga ku rarno akoonkaaga dhoofinta badan. Haddii aadan haysan mid aan ku dallaci karno, waxaan ku siin doonnaa soo-dirista markabka waqtiga ku habboon.
Fadlan ogowDhoofinta bilaashka ah iyo qiimaha dillaalka guryuhu kuma quseeyaan amarada badan.
Diyaar ma u tahay inaad qaaddo tallaabada xigta?
Haddii aad xiiseyneyso inaad soo dhigto amar ballaaran, fadlan buuxi foomka xiriirka ee hoose.